Home Wararka Dagaalka ka socda duleedka magaalada Baladweyn oo faraha ka sii baxaya
Dagaalka ka socda duleedka magaalada Baladweyn oo faraha ka sii baxaya
Waxaa faraha ka sii baxaya dagaalka u dhexeeya beela walaal ah oo wadadega degaano ka tirsan Gobolka Hiiraan. Guddoomiyaha Barlamaanka dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cabdixakiim Luqmaan Xaaji ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beleedka kasoo cusboonaaday deegaano hoos yimaada Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Waxaa maalmihii u danbeeyey iska soo daba dhacaayay baaqyo nabadeed laakiin cidna dhag jalaq uma siisin. Guddoomiye Dr Cabdixakiim Luqmaan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in beelaha dagaalamaya looga baahan yahay inay Colaalada ku joojiyaan, si shuruud la’aan ah, wuxuuna xusay in xilliga la taagan yahay Gobolka Hiiraan xamili karin colaad . Sidoo kale Guddoomiyaha Barlamaanka Hirshabeelle ayaa tacsi u diray dadkii ku geeriyooday dagaaladii dhexmaray labada maleeshiyo beeleed, halka kuwa dhaawacmay uu u rajeeyay Caafimaad, kana dalbaday joojinta dagaalka.
Dagaalka ayaa ay ka dhasheen Khasaaro isugu jiray dhimasho iyo dhaawac kaasoo sookala gaaray beelaha ku dagaalamayay deegaano hoostega Magaalada Baladweyne, waxaana dhowr jeer guulddareystay dadaalo lagu doonayay in lagu soo afjaro Colaada, iyadoona dagaalka uu salka ku haayo arrimo la xiriira dhul-daaqsiyeed. Magaalada Baladweyne ayaa Maanta waxaa gaaray wafdi ka socda dowladda Federaalka iyo Hirshabeelle oo halkaas u tegay sidii loo joojin lahaa dagaalka, isla markaana heshiis looga gaari lahaa Colaada kasoo cusboonaatay Gobolka Hiiraan.